Beesha gugdoomiyihii la dilay ee degmada Hodon oo go'aan culus soo saartay - Caasimada Online
Home Warar Beesha gugdoomiyihii la dilay ee degmada Hodon oo go’aan culus soo saartay
Muqdisho (Caasimada Online) – Beesha uu kasoo jeedo Guddoomiyihii degmada Hodon Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise (Dhagajuun) oo bishii Janaayo lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa dalbatay cadaalad, iyadoo baaq culus u dirtay madaxda dowladda.
Waxay sheegeen in marxuum Cabdixakiim uu waayey cadaalad, beeshuna shireyso, ayna doonayaan cadaalad degdeg ah, iyagoo diray digniin culus oo ay ku sheegeen in si kas ah loo dilay, kuna dhintay fagaare, dilkiisuna ahaa qorshe ayna dileen laba taliye saldhig
Hay’adaha amniga ayaa dilka guddoomiye Cabdixakiin u xiray taliyeyasha saldhigyada booliiska degmooyinka Howlwadaag, Gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamuud iyo Waaberi, Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir Mooshin, waxaa kaloo loo xiray 7 askari oo ku sugnaa bartii lagu dilay guddoomiyaha.
Warbixin lasoo dusiyey ayaa lagu sheegay in guddigii baarayay kiiska dilkii Cabdixakiin Dhagajuun ay kiiska ka dhigeen inuu ahaa mid shil ah, islamarkaana ay eeda ka saareen taliyaha saldhigga Waaberi iyo laba ka tirsan ilaaladiisa oo degdeg loo sii daayey, halka ay ku eedeeyeen taliyihii saldhiga Howlwadaag iyo 7 askari oo kale.
Guddiga kiiskan baaray ee ka kala yimid xeer illaalinta ciidamada, booliska iyo NISA ayaa warbixintooda ay abuurtay xaalad kale iyo shaki ku saabsan xaqiiqada waxa dhacay iyo dilka guddoomiyihii degmada Hodon.
Kiiskan ayaa ka mida mas’uuliyiin ku maqan gacanta ciidamada dowladda oo ana weli cadaalad helin. Beesha uu kasoo jeedo Marxuum Cabdixakiin Dhegajuun ayaan ka harin kiiskan oo digniintan soo saartay.
Hoos ka daawo go’aanka beesha